Hoggantoonni biyyootaa baqattoota osoo ta'anii maal fakkaatu? - BBC News Afaan Oromoo
Hoggantoonni biyyootaa baqattoota osoo ta'anii maal fakkaatu?
Artiistiin suuraa lammii Sooriyaa, Abdallaa Al Omaari hoggantoonni biyyoota addunyaa gurguddoo osoo baqqattoota ta'anii maal fakkaachuu akka danda'an fakkiidhaan agarsiisee jira.
Artiistiin suuraa lammii Sooriyaa kun hoggantoonni biyyoota gurguddoo akka nama loogiin irra gahee iddoo jireenyaa isaaniitii buqqa'anii fi baqataatti fakkeesse kaase. Kanneen keessaayis fakkiin Preezidaantii Ameerikaa Doonaald Traamp tokkodha.
Artiistin kun iddoo jireenya isaati buqqa'uusaa fi wal waraansa biyyasaa keessa jiru hojiisaa kanaaf sababa godhata. Kun fakkii Chaansilara Jarman Angeelaa Merkil agarsiisu dha.
Al Omaariin wayita ammaa kana Beeljiyeem jiraata. Hoggantoonni biyyootaa kan akka Pireezidaantii Raashiyaa Vilaadmiir Putiin humna isaanitiin ala maal akka fakkaatan mul'ise.
"Aangoo isaanii irraa kaasun barbaade. Kun aari yookin gadda koo akka balleessuf osoo hin taane miira namummaa hooggantoota kunnenii agarsiisufi" jedha artiistin kun.
Omaari'n hoggantoota beekamti olaanaa qaban kunneeniif kabaja osoo hin agarsiisin, yaada "isaan cimina fi beekumsa qabu" jedhamu cinaatti gochuun agarsiisera. Kuni pireezidaanti Ameerikaa kan ture Baaraak Obaamaa dha.
Kun ammoo gaabbii yookin dhiifama gaaffachuu Asaad mul'isa.
Al Omaariin fakkiisaa kanaan hoggantootni kunneen aangosaanin alatti yeroo rakkoo/baqannaa maal fakkaachuu akka danda'an agarsiisa.
Al Omaariin yaada isaa saaxilamummaa fi rakkoo inni fiduu danda'utti fayyadamuun miira namummaa fi quuqamuu agarsiisa. Kunnen hoggantoota Firaans kan turan Firaansuwaa Oloond fi Nikolaas Saarkozi dha.
Artisitiin kun iddoo fi bifa siyaasaa hoggantoonni kunneen hordofan osoo adda hin baasne fakkii kaase. Fakkiin kun hogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Jong Uun daa'ima misaa'ilaan tapha qabate fakkaatee mul'ata.
Al Omaari'n "Sagalee keenya ol qabnee ifatti yaa dubannu. Ani dadhabaa dha. Isin warri aangoodhaan cimaadha jedhamtanis akka aangoo keessanii ciccimoo miti" jechuun akeekkachiisa. Fakkiiwwansaa kunneen agarsiisaaf kan dhiyaatanii jiru.
Dorgommii kubbaa miilaa Itiyoo-Kenyaa suraan
Torbee faashinii Haab of Afrikaa suuraan